NUG အစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း အထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့ – Sport Gaber
NUG အစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း အထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ပိတ်ပွဲ နှင့် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၇၅)ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပိတ်ပွဲအစည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၃)နာရီအချိန်၌ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစည်း အဝေး ၌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. António Guterres မှ မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပြီး၊ (၇၅) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.E. Mr. Volkan Bozkir မှ နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်၊ (၇၆)ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံထားရသည့် H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် (၇၆)ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အစည်းအဝေးကို (၇၆)ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်၊ အထွေထွေညီလာခံ၏ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ (Credentials Committee) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ် ဘဟားမားစ်၊ ဘူတန်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ ဆီရာလွန်၊ တောင်အာဖရိက၊ ဆွီဒင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ပါဝင်သည်။
စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားသော ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်မှာ ညီလာခံ တက်ရောက်ခွင့်မရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးလို့ ကြောက်သွားမယ့်အထဲ ချင်းစစ်သည်တွေ မပါဘူးဆိုတဲ့ တကယ်လေးစားစရာ ချင်းသူရဲကောင်းစစ်သည်တွေ